Airmail inogadziridzwa nerutsigiro rweKufamba Kwebasa uye Bear | IPhone nhau
Airmail inogadziridzwa nerutsigiro rweKufamba kweBasa neBere
Nyika yekutumira haina kufa, Ini ndiri mumwe wevaya vanofunga kuti rimwe zuva tichava neshanduko huru maringe nemaemail asi ichokwadi kuti uzivi hwekutumira tsamba yemagetsi hune zvakawanda. Izvo zvakashanduka nekukwakuka uye miganho nyika yevatungamiriri veemail, vamwe mamaneja izvo zvishoma nezvishoma zvave zvichisanganisa masevhisi matsva ane chekuita nekugadzirwa kuita kuti hupenyu hureruke zvishoma, kana kuti kunyatsogadzikana.
Nhasi tinonunura Airmail, imwe yesarudzo dzakanakisa pakati pehuwandu hwese hwe mamaneja vatinayo muApp Store. Isu tinoda Airmail sezvo ivo vanogadzira vachiramba vachivandudza iyo app, chimwe chinhu icho pakupedzisira chinoita kuti ive nesarudzo itsva Iye zvino inogadziriswazve kuti tikwanise kushanda nayo nenzira iri nyore. Airmail ichangobva kuwedzera rutsigiro rweKufamba kweBasa neBere pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda ...
Chinhu chinonyanya kufadza nezve ino gadziriso ndechekuti ikozvino tinogona kushandisa dzese sarudzo dzeiyo Workflow app kugadzira otomatiki zvakananga kubva kuAirmailZviripachena unofanirwa kuve neiyo Workflow app, asi kana iwe unayo, iyi yekuvandudza ichauya inobatsira. Bear, mumwe weakanakisa manotsi edhita, zvakare anowana rutsigiro zvakananga kubva kuAirmail, ikozvino isu tinogona nyora mae-mail zvinyorwa mu Bear nenzira yakapusa. Zvese izvi pamwe nezviito zvitsva mukati me 3D Bata menyu, mukuwedzera kunatsiridza kwechokwadi kweakaundi maGmail.
Iwe unoziva, ivo vari € 4,99 asi chokwadi ndechekuti Airmail yakakosha kwazvoKana iwe uchitsvaga wakanaka email maneja uyo pakupedzisira anovandudza yako kugadzirwa zuva nezuva, usazeze kuwana Airmail yeIOS. Sezvawaona, zvinowedzeredzwa kazhinji kuti uve neAirmail kwechinguva. Izvo zvakare pasi rose, unogona kuishandisa pane yako iPhone, iPad, uye kunyangwe paApple Watch.
Airmail - Gmail Outlook Tsambavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Airmail inogadziridzwa nerutsigiro rweKufamba kweBasa neBere
Apple's Carpool Karaoke ichave nevatapi vakasiyana
Castle Creeps TD, imwe nzira yemutambo inoshandura iOS